श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर पूर्वडीआईजी कोइरालाको मुद्दा पूर्णइजलासमा सुनुवाइ हुँदै - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १२:३७
१२ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जनप्रसाद कोइरालाविरुद्धको रिटको पेसी सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासमा तोकिएको छ । पूर्णइजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडाल रहेका छन् ।
रिटको सुनुवाइका लागि पहिलो पटक १० चैत २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा रहेको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, उक्त दिन रिटलाई सर्वोच्चले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राख्यो । त्यसपछि आज सुनुवाइका लागि रिटको पेसी तोकिएको हो ।